Home Wararka Xuud oo sheegay dagaalka ka dhacay Baladweyne ay mas’uuliyadiisa leedahay dowlada
Xuud oo sheegay dagaalka ka dhacay Baladweyne ay mas’uuliyadiisa leedahay dowlada
Janaraal Abuukar Xaaji Warsame (Xuud) oo ah hoggaamiyaha jabhada la magac-baxay Kacdoonka Hiiraan ayaa faah faahiyey dagaal u dhexeeyey maleeshiyaadkiisa iyo ciidamada dowladda oo saaka ka dhacay Beledweyne.
Janaraal Xuud oo wareysi gaar ah siiyey Radio Mustaqbal ayaa shaaca ka qaaday in dagaalkaasi uu geystay khasaare kala duwan, wuxuuna qiray inay dhankooda uga dhaawacmeen 2 askari. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in dagaalka ka qarxay Beledweyne uu yimid, kadib markii sida uu sheegay looga baxay heshiis ay la galeen HirShabelle oo ahaa in shirar aysan ku qabsan karin magaaladaas oo xarun u ah gobolka Hiiraan, sida uu hadalka u dhigay.
Generaalkan ka gooday dooerashadii HirShabelle oo hadalkiisa sii wata ayaa ku goodiyey in haatan wixii ka dambeeya ay xabad ku wajahi doonaan maamulka HirShabelle. “Todobo bil ayaan wanaag & nabad raadineynay, dhinac waliba waa nalaga soo galay, waxa ay u muuqaataa in nala qasbayo balse ma aqbali doono, xal aan xabad ahayn kuma wajaheyno HirShabelle” ayuu markale sii raaciyay hadalkiisa.
Sida ay sheegayaan goobjogayaal, xaaladda Belweyne ayaa weli kacsan, waxaana laga dareemayaa dhaq-dhaqaaq u dhexeeya labada dhinac oo ka socda gudaha magaaladaasi.